हामी प्रत्येक जिम मा एक सुन्दर आकृति र taut, तर नियमित कक्षाहरू को सपना, धेरै बस बल न न त समय न त, कहिले काँही, इच्छा छैन। तर कुनै एक घर एक साना जिम व्यवस्था र आफूलाई कुनै पनि सुविधाजनक समयमा संलग्न bothers। यस लेखमा तपाईं सबै भन्दा राम्रो व्यायाम सुरु र व्यायाम कस्तो र खेल उपकरण तपाईं विश्वसनीय सहायक हुनेछ जहाँ केही उपयोगी सुझावहरू पाउनुहुनेछ।
धेरै दशकसम्म घर लागि सबैभन्दा लोकप्रिय खेल उपकरण को एक dumbbells छन्। तिनीहरूले आकार मा आफ्नो शरीर कायम राख्न बस छैन, तर पनि अभ्यास र नियमित व्यायाम को सरल जटिल थप सुन्दर धन्यवाद बन्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। गरेको पनि नियालेर हेरौं हात अभ्यास आकार मा आफ्नो शरीर ल्याउन मद्दत गर्नेछ dumbbells संग।
तर के प्रशिक्षण सुरु गर्न आवश्यक? यो उपयोगी को हरेक मालिक खेल उपकरण थाह कसरी आफ्नो हात माथि पंप सबभन्दा छोटो सम्भव समयमा dumbbells। यो इच्छा, मुक्त समय र एक सानो बिट आवश्यक हुनेछ willpower। तपाईं माथि को सबै छ भने, तपाईं प्रशिक्षण सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, तर परिणाम लामो लिन छैन।
याद गर्न मुख्य कुरा हो dumbbells संग अभ्यास हात, यो अन्य मांसपेशी समूहहरु को भार संग, बाहिर जटिल बोक्नु मनमोहक छ। तर हामी यस लेखमा ठीक जो विभिन्न हात मांसपेशीमा सम्बन्धित लोड, केन्द्रित हुनेछ।
व्यायाम 1 कुनै पनि गतिविधि न्यानो-अप सुरु गर्नुपर्छ। यो आदर्श लागि व्यायाम निम्न। तपाईं सीधा हुनैपर्छ, र आफ्नो खुट्टा अलग काँध-चौडाइ। कम तौल (दुई वा तीन किलोग्राम) संग Dumbbells प्रत्येक हातमा लिन र synchronously उठाउनु सुरु र त्यसपछि काँध, को पक्ष गर्न फैलाउने कोहनी तल। तपाईं बीस पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या गर्न दस दुई तीन सेट प्रदर्शन गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईं केवल न्यानो हात को मांसपेशिहरु कब्जे अघि, तर खराब छैन "पंप" को triceps।
व्यायाम 2: कसरत पछि, तपाईं उच्च भार गर्ने सार्न सक्छ। dumbbells संग हतियार लागि अभ्यास धेरै मांसपेशी समूह विकास, तर विशेष ध्यान गर्ने बाइसेप जोड भुक्तान गर्नुपर्छ। माथिको व्यायाम मा जस्तै बन्न, पाँच दस किलोग्राम वजन एक डम्बबेलनेबुला लिन र कोहनी तिनीहरूलाई झुकन, आफ्नो काँध आफ्नो हात उठाउनु बारी गर्न थाल्छन्। तपाईं अधिक पन्ध्र पटक प्रत्येक हात को उठाने बारम्बार सक्षम छन्, यो बिस्तारै लोड, को डम्बबेलनेबुला को वजन वृद्धि वृद्धि गर्न आवश्यक छ। एक पीठ प्रेस प्रति सत्र दुई वा तीन सेट हुनुपर्छ प्रदर्शन। उहाँले आफ्नो बाइसेप र triceps दुवै विकास गर्न मद्दत गर्नेछ।
व्यायाम 3. एउटै स्थितिहरू देखि (खडा, खुट्टा काँध चौडाई अलग) को डम्बबेलनेबुला, तेर्सो स्थिति दुई वा तीन किलोग्राम को वजन उचाल्न सुरु गर्नुहोस्। एक बेल्ट यो तय मा एक मुक्त हात। दस वा बाह्र पटक प्रति व्यायाम दुई तीन सेट प्रत्येक हात लागि दोहोर्याउनुहोस्।
व्यायाम4अलग खुट्टा काँध-चौडाइ, प्रत्येक हातमा एक डम्बबेलनेबुला लिनुहोस् तीन पाँच किलोग्राम वजन र सीधा बन्न। शरीर चालीस पाँच डिग्री को एक कोण खेल्छ भनेर र त्यसपछि अगाडि leans। अब हामी एउटै समयमा काँध तिनीहरूलाई खींच, दुवै हतियार उठाउनु सुरु गर्नुहोस्। dumbbells यी हात अभ्यास धेरै मांसपेशी समूह विकास गर्न मद्दत गर्छ।
व्यायाम5एक कुर्सी (खुट्टा अलग काँध चौडाई अलग) बसिरहेका, को जांघ को भित्री पक्ष मा कुहिनो समाधान र उठाउनु र कम तीन भन्दा किलोग्राम वजन भएको डम्बबेलनेबुला कम गर्न सुरु गर्नुहोस्। हरेक हात लागि दस पन्ध्र गर्न पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या सहित तीन सेट, प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ।
वजन संग माथि-वर्णन हात अभ्यास मात्र राम्रो आकारमा शरीर, तर पनि मांसपेशीमा तालिम एक राम्रो विचार राख्न मद्दत गर्नेछ। मुख्य कुरा हरेक दिन (सत्र मा घण्टा थप आधा भन्दा कुनै छोड्न हुनेछ) र आवश्यक यदि लोड वृद्धि गर्न नबिर्स को अभ्यास गर्न प्रयास छ।
व्यायाम "पुतली": प्रदर्शन प्रविधी। pectoral मांसपेशीमा लागि पुरुषहरु को लागि जिम अभ्यास मा
कसरी केही सरल व्यायाम प्रयोग गरेर, प्रेस निर्माण गर्न
बिरालो कान संग टोपी कसरी फिट? बिरालो कान संग बुनाई टोपी मा चरण निर्देशनहरूको द्वारा चरण
स्वादिष्ट मह agaric
संग्रहालय, Togliatti: ठेगाना, शीर्षकमाथिको घन्टा, प्रदर्शनी
भारतीय उद्योग। भारत उद्योग र कृषि